mmemme: Martin Vrijland
Kedu ihe bụ nsogbu nitrogen, gịnị kpatara ndị ọrụ ugbo ji eme mkpesa na gịnị kpatara mbelata ọsọ?
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 7 November 2019	• 12 Comments
Ọ dị ka ọ bụ ezigbo ihe otiti! Ndi oru ugbo niile choro belata nitrogen. Okwu ahụ '' nitrogen 'enweworị okwu okwu' subọchị 'n'ime onwe ya ya mere nke a na-eme ka nkezi nwoke nọ n'okporo ụzọ chee na anyị na-emeso otu ihe nke anyị niile ga-akpagbu. Eleghị anya […]
gbara akwụkwọ IHE SIM	by Martin Vrijland	na 11 July 2019	• 13 Comments
Ndị gụrụ isiokwu banyere ndị na-enweghị mkpụrụ obi (NPCs) nwere ike ịghọta ugbu a na okwu ahụ bụ "mmụcha" ma ọ bụ "mkpụrụ obi" nwere ike iji tụnyere njikọ ikuku n'etiti interface ụbụrụ na avatar na nyocha. Ihe avatar na nkoghari bu, di ka a na-acho, a na-achikota ya n'uwa ma ya mere o sitere n'ike mmụọ nsọ. Na isiokwu ahụ [...]
Akụkọ ma ọ bụ ihe nzuzu onye na-ahụ maka mgbasa ozi bụ onye kpebiri anụ nke ya: nkwanye onwe onye na mmemme nke onye na-ekiri ya
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 5 March 2018	• 13 Comments
A na-emeghe akụkọ Nonsense nke Rob Trip nke nwere ụzọ NLP dị, nke na-etinye onye na-ekiri anya na ọnọdụ ehi ụra site na nkwupụta hypnotic (rap-like) nke onye na-eto eto nke na-esikarị na-elezi anya nke ụda ntanye. Ihe a na-akpọ na e-mail na-abata na-aga n'ihu [...]
Gịnị mere ndị mmadụ ji anọgide na-agụ akwụkwọ akụkọ ma na-ekiri ozi ọma n'agbanyeghị mgbasa ozi dị ike?
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 3 March 2018	• 16 Comments
Naanị ị ga-emepee akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ nke akwụkwọ akụkọ ahụ ma ọ bụ bombardment nke okwu nduhie na-abịakwute gị. Ee, nke ahụ abụghị nanị okwu nduhie dị ka ị na-atụ anya ya site na nkọwa doro anya na ndị Russia enweela mmetụta ọzọ maka mkpọsa ntuli aka; ọ bụ kpọmkwem ụzọ aghụghọ, nkwenye na-enweghị isi [...]
Ngwongwo TV nke Hufterproof na-echefu na ndị na-eguzo na-abụ ndị na-eme ihe nkiri
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 23 January 2018	• 12 Comments
Ihe omume TV ahụ Hufterproef yiri ka ọ na-egosi n'ụzọ dị mma ka ndị na-anọchi ya si emeghachi omume n'ọnọdụ ụfọdụ. Ya mere, ha bịara n'izu gara aga na otu ihe gosipụtara otú nwatakịrị si zuo akpa site na ụgbọ ala (lee ebe a). Onye na-agbaso ya were iwe ma nwa okorobịa ahụ wepụrụ akpa ahụ n'aka ya. Mara mma anyị na-eche [...]
Onye ọrụ gbara ọsọ ndụ nke Tariq Tariq kwetara na ọ bụ omee maka ihe omume ahụ 'Onye gbara ọsọ ndụ na-eme ka ihe ọmụma'
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 10 August 2017	• 26 Comments
De Volkskrant kọrọ na abalị gara aga, onye gbara ọsọ ndụ Tariq, bụ onye ghabatara onye gbara ọsọ ndụ na mmemme ahụ bụ 'onye gbara ọsọ ndụ na-eme ka ihe ọmụma' kweta na ọ bụ onye ọrụ akwụ ụgwọ. Ọ ga-akwa ụta mgbe PowNed 2 ji okwu enweghị nkwanye ùgwù mee ihe n'otu isiokwu gbasara onye Siria gbara ọsọ ndụ na Venlo. Ọ bụ ya mere na ọ chọghị ihe ọ bụla ọzọ na onye mgbasa ozi [...]
Nleta ha: 4.159.321